मोल हराएको माउजंग बाबु साहेबको खानदानी कोट !
मोल हराएको माउजंग बाबु साहेबको खानदानी कोट !
भन्छन - मान्छेको मानसिकता उसको विरासतको इतिहास, आफ्नो वर्तमान र उसको सेरोफेरोले उसलाई गर्ने ब्यबहारले तय हुन्छ । उसले समाज समक्ष प्रस्तुत गर्ने ब्यबहार यी तिन चिजको समिश्रण बाट तय हुन्छ । यो एउटा चेन जस्तै हो । जब यो बिचमा कुनै खराबी आउँछ यो फंक्सनलेस बन्न पुग्दछ । यसैको शिकार बनेका छन् नाटकका प्रधान पात्र 'माउजंग बाबु' ।
राणा शासनका एक विर्तावल माउजंग बाबु बि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको च्युत भएसंगै सत्ता र शक्तिको बागडोर राजामा स्थानान्तरण हुन पुग्दछ । सत्ताच्युतसंगै राणाकालिन शासकहरुले राज्य ब्यबस्थाबाट भोगचलन गर्दै आएका सबैखाले सुखसयल तथा सुविधाहरु खोसिन्छन । हात खालि भएका राणाकालिन शासकहरुको वर्तमानमा कायापलट भएसंगै समाजले उनीहरुप्रति दर्शाउने ब्यबहार समेत परिवर्तन हुन पुग्छ तर उनीहरुले समाजप्रति दर्शाउने ब्यबहारमा भने परिवर्तन आउन सक्दैन ।
भनिन्छ - 'जता शक्ति उतै भक्ति' । समाजले गर्ने 'भक्ति' राणाबाट बसाइ सरि राजतन्त्रात्मक ब्यबस्थामा पुग्छ । हिजो उनीहरुले समाजबाट प्राप्त गर्दै आएको मान-सम्मान, हरुवा-चरुवा, रवाफ एकाएक सिद्धिन्छ तर सिद्धिदैन उनीहरुको मानसिक रवाफ । यही सामाजिक अन्तरद्वन्द्वलाई ब्यबहारमा उतार्न खोजेको छ नाटक 'माउजंग बाबु साहेबको कोट' ले ।
"मान्छेको मानसिकता उसको विरासतको इतिहास, आफ्नो वर्तमान र उसको सेरोफेरोले उसलाई गर्ने ब्यबहारले तय हुन्छ । उसले समाज समक्ष प्रस्तुत गर्ने ब्यबहार यी तिन चिजको समिश्रण बाट तय हुन्छ । यो एउटा चेन जस्तै हो । जब यो बिचमा कुनै खराबी आउँछ यो फंक्सनलेस बन्न पुग्दछ ।"
सत्ताको स्थानान्तरण त हुन पुग्छ तर संस्कार भने उनीहरुसंगै रहन्छ । उनीहरुले आफ्नो संस्कार न छोड्न सक्छन न त आजको समाजले उनीहरुको हिजोको संस्कार मान्न नै तयार हुन्छ । हिजो निम्तोका चाङ्ग हुने हवेलिमा आज निम्तो कुरी बस्नु पर्ने, यदाकदा आएका निम्तोहरुमा सांस्कारिक अनमेल हुँदा उनीहरुको मनमा पर्ने ठेस, यस्तै अन्तर्द्वन्द्वलाई नाटकका मध्यमबाट विजय विस्फोटले देखाउन खोजेका छन् ।
कोट एक प्रतिबिम्ब
नाटकमा कोट एक प्रतिबिम्बको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो बेलाको सम्भ्रान्त बर्गले मात्र लगाउन सक्ने बेलायतबाट आयातित 'बेन्सन' ब्राण्डको उक्त कोट माउजंग बाबुले बिहे, पास्नी, भोजलगायतका सामाजिक समारोहमा लगाउने गर्दथे । समाज सामु उनको स्टाटसलाई दर्शाउने 'कोट' एक बिम्ब थियो । तर बिडम्बना आज उनको हवेलिमा यस्ता सामाजिक समारोहबाट निम्तो नै आउदैन । विदेश तिरबाट श्रीमतीका लागि ल्याइदिएका महंगा महंगा सारी तथा गरगहनाहरु निम्तैको अभाबले माउजंग साहेब्नीले लगाउने अवसर नै पाउदिनन । धोबी तथा सुसारेहरुले आज उक्त कोट हिफाजतले समेत धोइदिदैनन, धोएर ठाउँमा रख्दिदैनन । माउजंग बाबु साहेबको कोट प्रतिको स्नेह भने आज पनि उस्तै छ । तर यो कुरा मान्न समाज तयार भइदिदैन । कोटका माध्यमबाट यही अन्तर्द्वन्द्वलाई नाटकले पस्कन खोजेको छ ।
पात्र माथि प्रवृति
नाटकमा बिर्तावल माउजंग बाबु साहेबको भूमिका जेबी डिसीले निभाएका छन् । एउटा सर्वश्व लुटिएको सम्भ्रान्त व्यक्तिको ठाउँमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न निश्चय पनि सजिलो छैन नै । नाटकका मूल पात्र डिसीले उक्त पात्रलाई भरपुर न्याय गरेका छन् । उनले आफुलाई सत्ता र शक्तिको ह्याङ्गओभरलाई बदलिएको समाजको बिचमा जसरी चपाएर प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो त्यसरी नै प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, पात्रहरु ; रोहानी लामा, कोपिला थापा, तुलसा पहाडी, अनिता थापा, रोहित खत्री, दिलिप खड्का, किरण चापागाईं, बालकृष्ण रिजाल लगायतले उनको अभियानमा मजाले साथ दिएका छन् । कक्षा १० को पाठ्यक्रममा समावेश भवानी भिक्षुद्वारा लिखित उक्त कथाको नाट्य रुपान्तरण तथा निर्देशन विजय विस्फोटले गरेका हुन् । यही भदौ २४ देखि राष्ट्रिय नाचघर जमलमा चलिरहेको नाटक असोज ५ गतेसम्म चल्नेछ ।
नाटकमा बिम्बको प्रयोग
नाटकका निर्देशक विजय विस्फोटले रंगमंचमा विभिन्न खाले बिम्बहरुको समेत प्रयोग गरेका छन् । स्टेजमा प्रयोग गरिएको प्रस्ट अनुहार नदेखिने ऐना, निरस ब्याकग्राउण्ड म्युजिक, ब्ल्याक एण्ड व्हाइट तस्बिर एबम जीकज्याक बाटोले त्यो बेलाको राणाकालिन संकटलाई दर्साउँछ ।